ရုပ်သံ 1451 views
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုပ်သံလိုင်းတစ်လိုင်းလွှင့်ရန် ဗီယက်နမ် လာရောက်ကမ်းလှမ်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗီယက်နမ် ရုပ်သံလိုင်းတစ်လိုင်းနှင့် သတင်းဌာနရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ပြန်ကြားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနဝန်ကြီး H.E. Mr. Truong Minh Tuan က အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် လာရောက် ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ပြန်ကြားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Truong Minh Tuan နှင့်အဖွဲ့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ MoU လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ အပြန်အလှန် နှစ်နိုင်ငံသတင်း အချက်အလက် ဖလှယ်နိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗီယက်နမ် ရုပ်သံလွှင့်ချန်နယ်နှင့် သတင်းဌာနရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
“အခုက ဝန်ကြီးက ကမ်းလှမ်းတာပဲ ရှိသေးတယ်။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ လာဆွေးနွေးတာပါ။ ခွင့်ပြုဖို့က လိုပါသေးတယ်။ သဘောတူလို့ MoU လက်မှတ် ရေးထိုးရင် တရားဝင် ကြေညာပေးမယ်”ဟု ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနထံမှ တာဝန်ရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲ ဥပဒေအရ ပြည်ပနိုင်ငံက သီးခြားရုပ်သံလိုင်း လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း၊ ပြည်တွင်း ရုပ်သံလိုင်း တစ်ခုတွင် အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်သာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်ကျော်က ပြောကြားသည်။
“ပြည်တွင်း ရုပ်သံလိုင်းတွေတောင် လိုင်စင် မကျသေးတာတွေ ရှိတယ်။ ပြည်ပက မြန်မာနိုင်ငံမှာ သီးခြားလုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေအရ လုပ်လို့ မရဘူး။ မြန်မာ့အသံနဲ့ ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင် ရတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဥပဒေအရ သီးခြား လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိသည်မှာ မှန်သော်လည်း ဗီယက်နမ် ရုပ်သံလိုင်းနှင့် အစိုးရ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန်မှာ ညှိနှိုင်းရဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါ ရုပ်သံလိုင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတိကျ မပြောဆိုနိုင်သေးကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြား သည်။
လက်ရှိတွင် အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ ပုဂ္ဂလိက ရွှေသံလွင် (Sky Net)၊ Forver Group (MRTV-4) တို့မှာ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပြီး အသစ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသည့် ရုပ်သံလိုင်းမှာ DVB, Mizzima, Fortune, Young Investment Group နှင့် ကောင်းမြန်မာအောင်ရုပ်သံလိုင်းတို့ ဖြစ်သည်။